It is me. Ko Niknayman.: ဆရာတော်သံဃာတော်များထံ ပန်ကြားချက်၊
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ဂိုဏ်းပေါင်းစုံသံဃံတော်အပေါင်းတို့ ဘုရား။ ဆရာတော်သံဃံတော်များဦးဆောင်သော ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန သပိတ်မှောက်ကံဆောင်ခြင်းသည် ဗုဒ္ဓရဲ့ ၀ိနည်းတော်နှင့် လျော်ညီပါသည်ဘုရား၊
လက်ရှိကာလ တပ်တွင်းတွင်အချင်းချင်းသဘောထား ကွဲနေပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် အလယ်ပိုင်းတိုင်းတိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ကိုကိုက တပ်မတော်ရဲ့ဖခင်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေမဟုတ်ပါ။ တပ်မတော်ရဲ့ဖခင်ဟာ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း သာ ဖြစ်သည်ဟု(၂၅-၉-၂၀၀၇) ရက်နေ့ တွင်။ ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်၊